Cover Faces » Miss Universe ( Myanmar ) 2014 – Sharr Htut Eaindra	11
ခင်ဇော် says: အကြည့်ခံတဲ့ မက်နှာလေးး
တောင်ပေါ်သား says: မျက်နှာကျပုံလေးက ချမ်းချမ်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်
Kaung Kin Pyar says: နေနေနဲ့ ပိုဆင်တာ….
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: မက်လောက်စရာ ဒဂွက်မှမရှိ
Kaung Kin Pyar says: ဖွေးဖွေးတောင် ခုတလော ထိပ်ပြောင်လာသလိုပဲ…ဆက်ဆက်ရေ…. (ရန်စထှာ…)
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဖွေးဖွေးသာဆိုလို့ကတော့…ထိပ်ပြောင်လည်း ချစ်မှာပဲ…
အောင် မိုးသူ says: Miss တွေထဲမှာ သူ့ကို သဘောအကျဆုံးပဲ အရမ်းအကြည့်ခံတယ်။
ကြောင်ဝတုတ် says: အပေါ်မှာ ပြောနေကြတာ အကြည့်ခံတယ်ဆိုပဲ….
La Yeik says: ဗမာ စစ်စစ်ရုပ်ထွက်လို့ သူ့ကို ပိုကြိုက်ပါဒယ်….ဒါပေမဲ့ အရပ်လေး နဲနဲ ထပ်ရှည်ရင် ပိုကောင်းမယ်….
CharTooLan says: မလှဝူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14445
kai says: Miss ဆိုတာမျိုးက.. လှတာတခုနဲ့ ဆုမရ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.